Nabadoon hadlay,”Anaga xildhibaan ayaa 9 sano Xamar noo jooga noomana soo laaban welina kursigii ayuu raadinayaa”.
July 23, 2021 Xuseen 13
Puntlandtimes (Garbahaarey)-Xildhibaanada muddo xasaanadeedkoodu dhammaaday ee barlamaanka Soomaaliya oo ay kujiraan kuwa kursiga joogey ku dhowaad 20 sano ayaa waxa ay weli quuddarraynayaan ku soo laabashada matalaadda bulshooyinka kala duwan ee ay ka soo jeedaan.
Qaar kamid ah nabadoonada iyo waxgaradka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Gedo ayaa durba saluugmo xooggan ka muujiyey xildhibaanada ku matala golaha shacabka ee Barlamaanka Soomaaliya.
Nabadoonka Guud ee Beelaha Reer Xassan oo ku magac dheer Jugayste ayaa waxa uu walaac ka muujiyey waxqabad la’aanta iyo fadhiidnimada xildhibaanada matala magaalada Garbahaarey iyo sida aysan waxba ugu qaban bulshada gobolkaasi ku dhaqan ee ay kursiga ku matalaan xilligaan.
“Reer Garbahaarey waa dad nabadda jeceloo cid walba waa isaga sacabinayaan, Annaga hadda Xildhibaan baan leenahay, 9sano ayuu kursiga joogaa, Ilmaha Garbahaarey joogana ma yaqaanaan, hadana wuu rabaa xilkii” Ayuu yiri Nabadoon Jugayste oo ka hadlayey arrimahaasi.
Nabadoon, xildhibaanku wuxuu ku socdaa casharradii uu ka bartay macallinkiisii, Maxamed Siyaad Barre, oo aan 21 sano waxba idiin qaban. Marka, bal iska suga 21 sano; intaas kadib inuu wax idiin qabto ayaa dhici kartee!
Xildhibaannada Mariixmaan (Mareexaan) waxay ku fiican yihiin inay Xamar ku ururaan oo halkaas kaga qaaqleeyaan guulwadenimo iyo waddaniyad maran oo aan nuxur lahayn kuna salaysan lajiifiyaana bannaan, xikmad la’aan, iyo caadifad. Itoobiya oo ay shalay meel kasta la taagnaayeen cambaaraynteeda ayey maanta u sacabbotumayaan.
Hilaac Taleec says:
Mr A. Arar, intii aan odhan lahaa ayaad ii tiri. Mahadsanid
Mareexan waa nasib-daranyihin, tag ama nasib uma lahan madax wanagsan, Mahamed Siyad iyo Farmajo midkodna waxba uma qaban, WADOYIN, WAXBARASHO, CAFIMAD IYO MASHARIC WAXBA LOOMA QABAN,, xitaa gobolada kale Somaliya ee Somaliya lalama simin, xaqdato ayaay madaxda Somali ka galee Gobolka Gado.
Siyaasiyiinta Mareexaan abidkoodba ujeeddadoo qura ayay Xamar uguyaacaan oo teendhada ugataagtaan, waana yaanay Majeerteenku Villada Muqdisho calfanin.
Waxaa laguxantaa in warka uguhorreeya ee ay hawada karaadiyaan, marka ay subax kasta sootoosaan, uu yahay Majeerteen maxaa usookordhay. Waxaa xinka noocan ah ee hinaasaha ba’an kusaleysan kucaanbaxay dadka Englishka looyaqaanno ee aan dadka Jarmanka ah waxba u oggolayn maadaama ay Jarmanku iyaga waxyaabo iyo siyaabo kasta kaga firfircoonyihiin.
Waxaa ay Englishku hinaasahan waalan ee madax-maray kadheefeen dibjirnimo, jirrinimo, iyo Jarmanka oo ay 50 sanadood gadaal ugadhacaan marka dhan walba lagadheehdo – xagga waxsoosaarka sancadeysan, dhaqaalaha, maaliyadda, sumcadda, horumarka guud, iyo tayada nolosha. Qofka Jarmanka iyo Yurubta kale soo arkay marka uu UK yimnaaddo ma rumaysto inay isku qaaradba xataa yihiin.
Masiibada ‘Brexit’ loola magacbaxay ee tii qarnigan uguxumayd lagu tilmaamay, ay Englishku madaxmadaxa isugutuureen sanadihii 2016-2020, ayaa hinaasahan ba’an salka kuhaysay oo aafooyinkeedu haddadan soo ifbaxayaan. Waxaa lasaadaalinayaa in Ingiriisku dhaqaale ahaan sagxaddii uguhooseysay sootaaban doono nusqarniga nagusoo foodleh Brexit aawadeed.
Hadda, reer tolkeenna Mareexaan ta Ingiriiska kuhabsatay ayaa iyagana kuhabsatay intii ay Majeerteenka laxintamayeen 60 sanadood ee nadhaafay. Haddii ay sidan kusiisocdaanna, waxaa 20ka sanadood ee xiga la arki doonaa carro Majeerteen oo Jarmanka sidiisa ushidan iyo carro Marexaan oo Ingiriiska sidiisa wada doqoshyo miiran ah oo noloshuna kuxuntahay.
Nabadoonku waxuu tooshka ku ifiyey arin ay guud ahaan somaali ku baraarugin. Waxuu istaahilaa in bilad la siiyo. Taariikhda somaaliyeed wali lama hayo madaxweyne ama raiswasaare xilka kusoo noqday Mar labaad laakiin xildhibaanadu maba ka dagaan xilka oo xisaab la”aan ayey doorasho kasta kusoo noqdaan kursiga. Meeshii lagasoo doortay iyo cidii soo dooratay dib uma jaleecan oo maba tabaan ilaa iyo lagaaro marka wakhti xileedku daamaado oo uu dib u xoqonayo kaarkii kursiaga. Ma jiraan cid maanta dhihi kadha waanu ka saramarnay kaar xoqidaas ah xisaab la’aanta oo waanuu ku qanacsanaha cida aanu kaarka u xoqno. Kursiga baarlamaanku waxuu noqday hal irmaan oo uu shaqsi iska maalo isagoo la moodo in uu daxal u helay. Hadii kursiga ay ku tartami lahaayeen musharaxiin badan waxaa dici lahayd in arinku sida ka duwanaan lahaa oo ay soo bixi lahaayeen rag iyo dumar damiir leh oo qaymo u yeela barlamaanka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada.
Arinka kale ee somaali aysan wali ku baraarugin waa faraqa u dhexeeya “Xulasho” iyo “Doorasho”. 1968 ayaa u dambeysey doorasho ka dhacda guud ahaan somaaliya oo lagu doorto xildhibaan. Dadku waa in ay fahmaan in xildhibaanka magacooda ku matala baarlamaanka aan la dooran ee shaqsiyaad soo xusheen oo ay lib iyo ixsaan u hayaan cida soo xulatay. Nabadoonkii ama madaxweynihii soo xushay ayuu boolida qaran la baduugaa oo dadka iyo dagaanka uu kursiga ku matalo ma daneeyo.
Miyaysan Inoo Ekayn in Aynnu Is Daba Qabanno Maant?
Xildhibaanada/Maanta (Waraabe/Dhurwaa)?Hooyadiis Nolosha
WAA KU NUUGAA- DHIMASHADANA WAA KU CUNAA.)?
Dadka maanta loo caleemo saaray in ay yihiin (Xildhibaano)?..
Xildhibaanada/MAANTA= TODAY NO ONE SEEMS” TO HAVE RESPONSIBILITY?
Kkk Majeerteenow ilma addeerayaalow iiga jawaaba.
Mar Mareexaan ximiyay,yaa ii sheegi kara before iyo after burburkii Mareexaan mucaarada system Majeerteen hor boodayo?Waxaa jirtay mar Cumar Cabdirashiid ay odayaal u tageen oo uu ku yiri waxaan metelaa Majeerteen waliba Maxamud Saleebaan kaliya oo qolyo Mareexaan iyo Ogaadeen buuqeen Mareexaan kiina buuqii ka hareen ooy yiraahdeen yaan shisheeye ugu hor marin wey qoran tahay.
Ma haysaan MP Somali oo dhan degaankiisa si joogta ah u taga u jooga ama wax u qabtay?Xumaantiina sow ma cadda.
Wali ma haysaan Majeerteen waligii taageeray system Mareexaan hogaamiyo?
FG:Yuulka ayaad been u sheegteen isagiina daraadiin markuu godob u galay ayaad ka riixateen kkkkk.
Xildhibaanada Majeerteen sow Cabdi Bare reer Biidyahanka ahaa kama mid ahayn ee Xasan sheekh TV ka amaanayay isagoo Puntland dagaal lagu jira.Yaa sheegi kara MP Majeerteen oo wax ka qabtay degaankiisa?Wax qabadka Majeerteen waa un ka daba yuuska Mareexaan.
Yaa sheegi kara 1 siyaasi oo Majeerteen oo degaan kaloo Daarood 1 qol oo school ka qabtay?
YAA CALOOLO WEYN IIMAANLAAWEYAAL.Ceebtiina Somali oo dhan baa taqaan.
@@@ A. Rarar & Awlal!!!
Marka hore waan idin salaamay.
A. Arar ayaan hore waxaan arkayey mar aay diyaaradaha Kenya duqeeyeen deegaano kamid gobolka Gedo oo aay daf shacab ah oo dumar iyo ciyasl u badnaa iyo xoolo ku laayeen adiga oo qoray”Mareexaan in uu Shabaab yahay dadka oo dhami way ogyihiin”! Hadalkaa oo sida ka muuqato aad ugu qiil bixineeysey, duqeyntii aay Kenyanku sameeyeen in aay gar ahayd!
Adigoo sida aan filayo og in aaysan jirin mid kamid ah 6da Degmo ee gobolka Gedo oo uu Shabaab ka taliyo. Taasi oo Mareexaan ka dhigeeysa, Qabiilka kali ah ee Gaalkacyo Koofur ka xiga ee uusan Degmo kali ahi Shabaabka aad ku sheegtay ka haaysan. Halka Ogaadeen oo aad qalad iyo saxba taageerto oo wax badan Mareexaan ka Hub badan uu 2da Jubbo aay midna sida aay u dhantahay uu shabaab ka taliyo, midna aay Afmadoow iyo Kismaayo gacan kaga hayaan! Kuwaa oo aadan weligaa Shabaabnimo ku shaabbadeyn!
Tan Xildhibaankan laga hadlay ee aad nin 30 sano ka hor dhintay iyo Siyaad Barre la aaday. U maleyn maayo in uu jiro hal Xildhibaan oo makid ah qowleeysatadaa Xamar tuuran oo uu ka mahad sheegto deegaan uu ka soo jeedo, laakiin qolodan Mareexaan wax aay Qabaa’ilka kale Qabyaalad ka indho saabtay ayay sheegeen, in lagu cambaareeyana ma mudno!
War Maandhow asxaan lagama tago eed haddaad faliye! (Sayidkii)
Awlal, inta aan ogahay ma jiro loollan 60 sano soo socday oo u dhexeeyey, Mareexaan iyo Majeerteen. Haddii aay ka tagi weeyso, waxaan ogahay in aay jiryay, xurguf Kacaankii la jaanqaaday oo markii uu meesha ka baxayna iska dentay oo u eg in boorkii dib looga jafay, 4tii sano ee tagey ee Farmaajo. Inta aan ogahayna, Mareexaan 70% wuxuu degaa Gedo, Mareexaankaasna afgoodu maba yaqaano Majeerteen ee waxaay isticmaalaan Harti, naceybna uma qabaan Majeerteen, saa derisba lama ahane!
Midda Ingiriiska iyo Jarmalka aad Mareexaan iyo Majeerteen ku mataashay. Adaanan fahmine, Ingiriis iyo Jarmal midka labadoodu buro sida ee
“Muufada in Maraqa” la gula daarta diidaya waa Ingiriis. Oo Ingiriis wuxuu la baxsanaysa oo si toos ah u hoos yimaado. Canada, Australia iyo New Zealand. Halka wax ka badan 40 dowladood oo uu gumeystay oo aay ugu horreeyaan Mareeykanka iyo Indiana aay si ama si kale u hoos yimaadaan. Marka arrintan “Homework” kale ugu noqo haddii aay Mareexaan iyo Majeerteen noqon lahayd iyo haddii aay Ingiriis iyo Jarmal noqon lahaydba!
Mareexaanna intan oo uu idinla wadaago ku ciseeya. Muslim in uu idinla yahay ku ciseeya. Soomaali in uu idinla yahay ku ciseeya. Dalka in uu idinla leeyahay ku ciseeya. Daarood in uu idinla yahayna ku ciseeya! Wabbillaahi towfiiq.
Ugaas waa ku salaamay, soonoqosho wanaagsan. Beri dhexdaas ah oo aad nin Somaliland taageersan nasabaddiisa durtay kadibna uu kugu yiri intii cay adduunka jirtay, ninkii sidaa u xanaaqay inuu ku habaaray ayaan mooday, haddiise aad nabdoon tahay waa khayr.
Aniga waxay iga ahayd guubaabo iyo in Mareexaan usoo jeesto inay dhulkooda wax u qabtaan. Arrinka Jaalle Siyaad, hadde, kaasi taariikh dhab ah, taariikhdana waxaa loo bartaa in lagu cibroqaato oo laga faa’iidaysto. Ujeeddaydu waxay ahayd jegadii dalka ugu sarreeysay oo wiilkiinnii 21 sano hayey ayaanu waxba idiin ku qaban, kan maanta joogana wax uu Mareexaan usoo kordhiyey oo ahayn tafaraaruq, askar, iyo xabbad — magaranmayo anigu.
Waa run in xildhibaannada maanta jooga aanay wax badan isdhaamin; kuwa Mareexaan waxaa u dheer loomaba oggola inay dhulkoodii booqdaan oo airportka Xamar ayaa loo fadhiyaa.
Mareexaan waxaan Al-Shabaab ugu tilmaamay, runtii, ragga aan la sheekaysto oo Mareexaanka ah baa Al-Shabaab wada taageersan, taasna waxaan ka qaatay sample guud oo aan qabiilka ku dabbaqay.
Magaca ‘Mariixmaan’ waxaan usoo qaatay waxaan arkay nin youtuber ah oo qabyaaladiiste ah oo u qura ama ugu dhawaaqa ‘Mariixaan’ — waa oppositeka ‘Mariixmaan’ — oo ulakac ayuu sidaa u sameeyaa.
Waan kaa guddoomay salaantaada qiimaha badan, adigana teenna gobeed ayaan hawada kuusoonmarinayaa.
Horta anigu intaa xas baan tumaa oo mandaqyo iyo mowduucyo ayaan doodo kucuriyaa, aniga oo ujeeddooyin baaritaanno salka kuhaya kaleh; kumana khasaaro inta badan oo waxyaabo badan baan dadka iyo maankoodaba ka ogaadaa.
Hadalkaaga waxaan kadhadhansaday inaad UK degantahay oo beenta iyo borobagaanka ay conservative-ku shacabkooda dulleysan kuseexiyaan adigana iska rumaysatay. Haddaba aan xaqiiqada jirta kuufaydee, waddamadaas aad sheegtay iyaga ayaaba UK shirqoolka dhaqaale ee uguxun umaleega, gaar ahaanna Mareykan, Canada, iyo Australia.
Australia iyo New Zealand suuqa dhaqaale ee qaaraddooda Australasia ayay iimansadeen, sidii uu Ingiriisku Brexit kaddib u iclaamiyay damaciisa kubiiridda suuqaasna labadan waddan cabsi iyo neceyb horleh ayay usiiqaadeen, iyaga iyo Shiinuhuna ma aqbali doonaan inuu sahalkaas cadkoodaas kuusan ulawadaago. Mareykan iyo Canada haatan kaddib waxaa awooddooda siyaasadeed lawareegi doona qowmiyadda Hispanica ah oo iyaguna waddamadooda Koonfurta xiga siidhisi doona.
Jarmanku Yurub oo dhan ayuu dusha kaxukumaa oo waxaa hoosta kalaxulufaysan Shiinaha, Turkiga, iyo waddamo kale oo sooxoogeysanaya. Sidoodana, Ingiriisku cuduudda dhaqaale ee Jarmanka oo keliya ayuusan abid gaari doonin, tan EU-da oo la iskudarayna habasheegin. Ingiriis isaga ayaa maanta waddamadii uu gumeysan jiray ee wada sab’oolka ah baryootan ugujira inay ceebtiisa asturaan oo heshiisyo ganacsi lasaxiixdaan.
Hindiduna weligoodba dabaqoodhiga uguxun ayay Ingiriiska u ahaayeen xisaabba kumajiraan, dhaqalaahooda sookorayana shisheeyaa leh ee iyagu faqrigooda dunida ugu dulleysan kamabixi doonaan abidkood. Pakistan ayaa mardhow xawli iyo xawaar dheer kudhaafi doontaee ufiirso.
War reer Gediw xaal qaata.
Rag cay iyo aflagaado wax aan ahayn ku hadlin baa baa neesga wax ku qora ,oo iso jiibiya amaantaa reerja ay Soomaali ka yihiin,beelaha Soomaaliyeed ee kale wax xun ka sheega,horta kuwa meesha ra’yiga beelaa beela anshaxa iyo fadhi ku dirirka aadka u heer hooseeya ku nafisa ayaa dadja suda dhabta ah xildhibaanada la soo magacaabo ee deegaankooda ka xisaabtama meel kale oo aan loi joogin ka hadlo.
War xildhibaanada Puntland ee itaba ka mid ah kuwa gobolada kale ee Soomaaliya ula xisaabtama ama sidaasi ku socda.